स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - दैनिक
स्वास्थ्य/जीवनशैली December 12, 2016
तीतेपाती जताततै पाइन्छ । तर यसको उपयोगबारे कमैलाई थाहा हुन सक्छ । या जानकारी भएर पनि बेवास्ता गरिन्छ । तीतेपातीको प्रयोगले दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य समस्या समाधान हुन्छ । विशेषगरी महिला प्रजनन स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि यो लाभदायी हुन्छ । महिनावारी भएपछि सरसफाइको कमीका कारण कतिपय महिलाको गुप्तांग चिलाउने हुन्छ । कन्याउँदाकन्याउँदा कतिपय महिला हैरान […]
हिजोआज कपाल झर्ने समस्याले धेरै मानिस तनावमा पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी पुरुष कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान भएको पाइन्छ । धेरैको गुनासो हुन्छ, मेरो उमेर नै पुगेकै छैन कपाल झरेर केही बाँकी छैन । आखिर किन झर्छ पुरुषको कपाल ? यसका केही वैज्ञानिक यस्ता छन् । धूमपान धूमपानका क्रममा निलिने निकोटिनको कारण पुरुषको रक्तनलीहरू खुम्चिन […]
स्वास्थ्य/जीवनशैली December 1, 2016
ललितपुर । नेपालमा एचआइभी संक्रमित महिलाको संख्या दश हजारबढी रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । एचआईभी एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार गत असारसम्म नेपालभर २८ हजार ८ सय ६५ जना एचआईभी संक्रमित रहेकोमा ती मध्ये १० हजार ८ सय २४ महिला संक्रमित छन् । संक्रमित हुनेमा ९२ जना यौनिक अल्पसंख्यक महिला छन् । […]
स्वास्थ्य/जीवनशैली October 18, 2016
काठमाडौं । टाइफसका कारण चितवनमा थप एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। कालिका नगरपालिका–६ निवासी १३ वर्षीया बालिकाको स्क्रब टाइफसका कारण मृत्यु भएको चितवन मेडिकल कलेजले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा दयाराम लम्सालका अनुसार सामान्य ज्वरो आएपछि उनलाई भदौ २८ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारका क्रममा सोमबार मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। योसँगै चितवनमा […]
‘सामान्य उपचार अभावमै कतिपयको मृत्यु’
समाचार, स्वास्थ्य/जीवनशैली बुधबार २६ साउन, २०७३
काठमाडौं । उपचारका लागि काठमाण्डू आउने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी सुत्केरी र शिशुले ज्यान गुमाएको समाचार आइरहँदा ग्रामीणस्तरमै दिन सकिने कतिपय सेवा राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्दा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। उपलब्ध स्रोत पनि सहि ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु र शहर केन्द्रित निजी स्वास्थ्य सेवालाई गाउँस्तरमा विस्तार गराउन नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको उनीहरु […]
स्वास्थ्य/जीवनशैली August 9, 2016
सामान्य भाषामा इन्फ्लुएन्जा वा फ्लुलाई भाइरल ज्वरो भनिन्छ । एक्कासि ज्वरो आएमा, श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो, जीउ दुख्ने, टाउको दुख्ने लक्षणहरू देखा परेमा त्यस व्यक्तिलाई इन्फ्लुएन्जा भएको भनिन्छ । प्रायः कडा घाम र पानी पर्ने मौसममा यसले प्रकोपको रूप लिने गरेकाले यसलाई मौसमी इन्फ्लुएन्जा पनि भन्ने गरिन्छ । बदलिँदो मौसम, वायु प्रदूषण तथा दूषित पानीका कारण भाइरल […]
अस्थाई साधन प्रयोग गर्ने महिला धेरै
स्वास्थ्य/जीवनशैली July 13, 2016
दोलखा । जिल्लामा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दोलखा जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७२/ ०७३ मा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेहरूको संख्या विगतको तुलनामा दोब्बर बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । तिव्र गतिमा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले परिवार नियोजन, आमा […]
दमरोग कसरी हुन्छ ? लक्षण, उपचार, जान्नै पर्ने कुरा
स्वास्थ्य/जीवनशैली June 13, 2016
अहिले हाम्रोमा दमका बिरामीहरू बढिरहेको पाउँछौं । हस्पिटलमा पनि हामीले अन्य बिरामीभन्दा दमका बिरामी बढिरहेको पाउन सक्छौं । खासगरी जाडो महिनामा दमका बिरामी बढ्छन् । दम धेरै किसिमका हुन्छन् । दम कुनै एउटा रोग होइन, यो त एउटा लक्षण मात्रै हो । साधारणतः वृद्धहरूलाई श्वास–प्रश्वास बढिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई हामीले दम मान्छौं । तर, दम त एउटा […]
गर्मीबाट यसरी बचाउनुस् बच्चालाई
स्वास्थ्य/जीवनशैली May 25, 2016
काठमाडौं । यतिखेर तराईको तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा पनि उकालो लागेको लाग्यै छ । गर्मीमा घाँटी खराब हुनु, रुघा, ज्वरो आउनु सामान्यजस्तै हो । तर उचित सावधानी राखियो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ । गर्मीका बेला लाग्ने रोगबाट बचाउन बाबुआमाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर यो बेला भरपूर पानी पिउने, पोषणयुक्त आहारा दिने, धेरै समय बाहिर ननिस्कने […]
गर्भवती हुँदा खानैपर्ने १० खानेकुरा
स्वास्थ्य/जीवनशैली May 15, 2016
अन्डाः अन्डामा प्रशस्त प्रोटिन र क्लोरिन हुन्छ । अन्डामा क्लोरिन समेत हुनाले यसले बच्चाको मस्ष्तिक र समग्र शरिरको बृद्धि गर्छ । अन्डामा ओमेगा ३ फ्याट हुन्छ । यो फ्याट दिमाग र दुष्टिको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । गेडागुडीः फाइबर र प्रोटिनयुक्त गेडागुडिले कब्जियत र हेमोरोइडबाट बचाउछ । साल्मनः यो ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसमा […]